Accueil Ny Mpitandrina Toriteny
« Ity no Zanako izay nofidiko ; Izy no henoy. » (Lio 9 :35)
Ao amin’ny teksa momba ny fiovan-tarehy, dia i Lioka irery no evanjelista nilaza tamintsika fa Jesosy dia nandeha tany an-tendrombohitra mba hivavaka. Ary nandritra ny vavaka nataony dia niova endrika Izy. Andro vitsivitsy talohan’io, dia nampahafantariny tamin’ny mpianany fa hiakatra ho any Jerosalema Izy ary holavin’ny manam-pahefana sivily sy ara-pivavahana ary hohelohina hijaly sy ho faty. Androany anefa, amin’ny alalan’ny fifandraisany amin’ny Rainy, izany làlan’ny fahoriana sy ny fahamaizinana izany dia mihamazava, takatra avokoa ny heviny. Izany hoe: tsy maintsy mandalo amin’ny fahoriana vao tonga amin’ny famirapiratana. Tsy ny fahafatesana no tompon’ny teny farany fa ny fandresena mamirapiratra amin’ny alalan’ny fitsanganana amin’ny maty. Mahery ny fitiavana noho ny fahafatesana. Koa amin’I Jesoa ny fahoriana sy ny fahafatesany dia lalan’ny fahafahana, “fivoahana” izay mitarika Azy ho amin’ny fitsanganana amin’ny maty.
Lire la suite : Toriteny 17/03/2019
Ilay fanjonoana mahagaga sy ny fiantsoana an’i Petera (Lio 5 :1-11)
Ny Filazantsaran androany dia mahakasika antsika ! Ny zava-niseho dia tamin’ny fiadohan’ny asa fanompoan’i Jesosy tany Galilia, teo amoron’ny ranomasin’i Genesareta. Taorian’ny batisany sy ny fakan’ny devoly fanahy Azy tany an’efitr’i Jodia, dia lasa nankany amin’ny tanàna nahaterahany aloha Jesosy, dia i Nazareta. Nambarany mazava tsara tany fa tonga ho an’ny mahantra, ny mifatotra, ny jamba ary ny voan’ny tsindry hazo lena Izy ; mba hanasitrana, hanafaka ary hampionona azy ireo. Tao Kapernaomy dia nanasitrana tao amin’ny synagoga sy tao an-tranon’i Simona Petera Izy. Gaga ny olona noho ny herin’ny teniny. Tsy mba niteny toa antsika mantsy Jesosy fa tamin’ny fahefana sy ny hery no nitenenany. Toy ny « avy any an-kafa » izany no niavian’ny teniny. Tsy very maina ny teniny, fa niasa teo amin’ny vatana sy tao am-po. Ny teny nambarany no ilay lazain’i Lioka hoe « tenin’Andriamanitra » (Lio 5 :1), teny « izay miteny » toy ny an’Ilay Mpahary.
Lire la suite : Toriteny 10/02/2019
NY NAKAN’NY DEVOLY FANAHY AN’I JESOSY (LIO 4 :1-13)
Ny tantaran’ny nakana fanahy an’i Jesosy izay vao avy novakiantsika teo dia milaza amintsika ny toerana fototra niavian’ny famelezana, ny fiasan’ny ratsy sy ny fahotana izay tian’i Jesosy ho sedraina mba itovizany amintsika amin’ny lafiny rehetra, afa-tsy ny fahotana( satria tsy nanana ota Izy) : « Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa Izay efa nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra tahaka antsika, kenefa tsy nanana ota » (Heb 4 :15).
Andeha ary hojerentsika amin’ny an-tsipiriany kokoa ny tantaran’ireo fakam-panahy tantarain’i Lioka mba hisintonana lesona momba ny diantsika mankany amin’ilay Ray mpamindra fo.
Lire la suite : Toriteny 10/03/2019
Lire la suite : Toriteny 13/01/2019
Lire la suite : Toriteny 06/01/2019
NY FOTOTRY NY FAHASAMBARANA KRISTIANA (Sal 84/12 )
Efa programan’Andriamanitra hatrany am-piandohana ny hahasambatra ny olona ka nametrahany azy tao amin’ny saha Edena. Napetrany teo anoloan’I Adama sy Eva ny tsara sy ratsy, na ny fiainana sy ny fahafatesana tamin’ny alàlan’ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay naniry teo afovoan’ny saha. Satria tian’Andriamanitra ny hahasambatra ny olona dia nanaja ny safidin’ny olombelona Izy, ka na dia nampitandremany aza ny olombelona tsy hikasika ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia tsy nankato izany fa nikasika ihany ary nihinana mihitsy. Izany hoe aleon’ny olombelona nifidy ny fahafatesana noho ny fiainana, ka dia tafasaraka tamin’Andriamanitra izy.
Lire la suite : Toriteny 30/12/2018
Manana ny fomba mahatsikaiky hitantarany amintsika ny Noely na ny Krismasy ny Filazantsaran’I Jaona.Tsy mba misy tranon’omby (crèche), tsy mba misy kintana, tsy misy anjely, tsy misy mpiandry ondry, tsy misy zazakely, tsy misy reny. Fa fahitana goavana momba ny famoronana izao rehetra izao sy ny lahatrantsika ny olombelona no hita ao. Fitantarana misy aina ahafahana mandrefy ny lozan’izao tontolo izao sy ny fitiavan’Andriamanitra. Ny lozan’izao tontolo izao dia aseho amin’ny aizina, izay midika ho tsy fisian’ny fiainana, ny fahakiviana, ny fahotana. Ny fitiavan’Andriamanitra kosa dia aseho amin’ny alalan’ny hazavana, izay midika ho fahafenoan’ny fiainana.
Lire la suite : Toriteny 25/12/2018
Lire la suite : Toriteny 16/12/2018
Lire la suite : Toriteny 09/12/2018
Lire la suite : Toriteny 02/12/2018
Lire la suite : Toriteny 25/11/2018
Lire la suite : Toriteny 11/11/2018
Lire la suite : Toriteny 04/11/2018